insipho ukwenza inqubo ekhaya uya recognized e experimenters ngokugqamile abafuna uzama ukwenza yonke into bebodwa, ngisho kuyingxenye esisemqoka ye inhlanzeko - insipho.
Zimbili izindlela insipho ukwenziwa: ashisayo nabandayo. Indlela yokwenza insipho "kusukela ekuqaleni" indlela elishisayo? Ukuze wenze lokhu, mass insipho kufanele iphekwe impela isikhathi eside, amahora 5, kanye womshini Castilia insipho kuzothatha okungenani amahora angu-6. Ungayisebenzisa cishe ngokushesha ngemva kokuba ukupheka. Ngo indlela abandayo emva isinyathelo trace insipho ngeke uvuthwe mayelana 1 inyanga.
Ukuze wenze insipho ngezandla zabo "kusukela ekuqaleni", uzodinga abanye izithako kanye izesekeli, ngaphandle lapho ngeke zisebenze. Oku-isidingo sokulungiselela egumbini futhi imishini insipho ukwenziwa. Kumelwe nakanjani kube indawo lapho kuzoqhubeka kule nqubo umoya. Zonke izitsha, nezinkezo yokulinganisa futhi amathuluzi akufanele isetshenziswe kamuva ukupheka.
Uma uthatha i-class okuthakazelisayo enjalo, ungakhohlwa ngokuthi usebenza nge ezonakalisayo, ngakho-ke kuyadingeka ukuba abe isivikelo. Ukuphepha - Okokuqala! Njengoba inkinga indlela yokwenza insipho "kusukela ekuqaleni" kuhilela ukusebenza alikhali, lapho lezi zinyathelo zidingeka ngokushesha, futhi badinga ukulandela ngokucophelela.
Soap - inqubo sina futhi zokudala, okumele imizwa nemicabango etshaliwe. Ungakhohlwa ukuthi kufanele sondelana lo msebenzi ajabule futhi njalo usesimweni esihle.
Soap "kusukela ekuqaleni" is etholwe ukusabela fatty acid kanye alikhali. Ngo inqubo saponification iqala ukusabela zamakhemikhali. Ingasetshenziselwa njengoba wax okunamafutha acid, zemifino amafutha, ezilwane kanye amafutha, butters.
Ngaphambi kokuqala inqubo, zama ukuvala oilcloth labo izinto nezindawo phansi ukuthi kungalimala alikhali hit kubo. Kuyadingeka nesikali esinembile ngoba kokucabangela yabahlanzi futhi amafutha, ikakhulukazi uma ukupheka obuncane enesisindo esingaphansi kg ½. Uzodinga esitsheni ukuxuba izithako, pan, ukushisa-ubufakazi Isitsha alikhali, strainer, izinkomishi alahlwayo, inamathela yokuhlanganisa, ukuma, spoon, izinga lokushisa, futhi mixer.
Ngakho, thina uqhubekele experiment ngokuthi insipho yethu "kusukela ekuqaleni". Sikunikeza kule iresiphi esikhundleni okuqukethwe amanzi ikhukhamba incumbe. Esikhathini insipho kuyoba umbala ocebile amahle aluhlaza, futhi isisindo ikhukhamba ijusi bese uyinika olubushelelezi akhethekile umsungulo.
abalandeli abaningi ukwenza insipho ngezandla zabo "kusukela ekuqaleni 'lisetshenziswa njengophawu ngesisekelo kokuqendwa insipho billet. It has a Foam ohlabayo ejenti, nezivimbelakuvunda futhi thickeners. Kulokhu, njengoba uma usebenzisa alikhali, insipho ngeke 100% yemvelo.
Soap "kusukela ekuqaleni". Jikelele imithetho yokukhiqiza:
anqume ngalolo zokupheka kanye ukubala isisindo izakhi ezidingekayo;
nesisindo ngokunembile izithako. izingxenye okuqinile kanye nama-liquid igcinwe iziqukathi ahlukene;
nesisindo amanzi, iqhwa noma ikhukhamba mass. Sebenzisa kuphela amanzi ahlanzekile, ebhodleleni;
nesisindo fillers kanye izithasiselo;
Melt endaweni okugeza amanzi izingxenye okuqinile: wax namafutha;
ingubo ngezembatho elihlangabezana ukuphepha: iphinifa, amagilavu, amagogolo futhi ngomshini;
ngokucophelela nesisindo alikhali;
esitsheni lapho isixazululo ane-alikhali kwenziwa, kumele afakwe igobolondo ngaphansi kwengcindezi amanzi abandayo, lapho umthamo ngeke kuphole ngesikhathi yokusabela chemical.
alikhali uthele izingxenye ezincane, ibangele njalo. Uma esikhundleni amanzi, usebenzisa ice, lincibilike kweso.
ngemva alikhali ziyoncibilika, uthele isixazululo ngokusebenzisa strainer kuya ingxube uwoyela, ukugwema ukubonakala zinhlayiya undissolved, okungase kubangele isikhumba ezishile ezishisayo. Yonke inhlama mix kahle.
Isimiso zendlela yokwenza insipho "kusukela ekuqaleni", Manje uyazi. Manje khetha indlela ukupheka kanye namafomu ukugcwalisa evumelana nawe umhlabeleli.
Tank wenza lamaswidi. Imibono izipho amnandi amaswidi ngezandla zakhe
Ogwini ethandwa kakhulu e Montenegro